Famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny mpiofana tao amin’ny LTP Ampasampito – METFP
Famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny mpiofana tao amin’ny LTP Ampasampito
Tao aorian’ny fiofanana nandritry ny iray volana dia navoaka tamin’ny fomba ofisialy anio 26 jolay 2021 tao amin’ny LTP Ampasampito ny andiany voalohany nanaraka ny sampam-panofanana « Mécanicien d’entretien démarreur » sy « Mécanicien diagnosticien ». Miisa 57 mirahalahy ireo andiany nisantatra izany fanofanana izany ka ny 38 no nanaraka ny « Mécanicien d’entretien » ary 19 kosa no nanaraka ny « Mécanicien diagnosticien ». Tonga nanome voninahitra izao fotoana izao Andriamatoa TSIKEL’IANKINA Ernest, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa sy ireo mpiara-miasa aminy, ireo solotena avy amin’ny Mater Auto, izay mpiara-miombon’antoka amin’ny LTP Ampasampito, ary ny Filoham-pokontany izay angady nanana sy vy nahitana ireo mpiofana.
Tsara ny manamarika fa ireo tanora mpiofana ireo dia avy amin’ny fokontany Ambohimahintsy sy Nanisana izay ny fokontany sy ny LTP no niara-niasa tamin’ny fandraisana azy ireo. Tanjona goavana imasoan’ny METFP ny fanomezana fahaiza-manao ho an’ny tanora mba hahafahan’izy ireo miasa sy mamorona asa mahavelona.
Raha ny eto Madagasikara dia hita sy tsapa fa efa mihamaro ireo fiara elektronika ka tombony lehibe ho an’ireto tanora ireto ny fisitrahana ity fiofanana ity. Manaraka ny teknolojia hatrany ny fampiofnana ary vonona hatrany ny LTP Ampasampito hanome fanofanana mifanaraka amin’ny vanim-potoana. Mampihatra ny fanapariahana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ny Ministera amin’izao fotoana izao araka ny veliranon’ny Filoham-pirenena. Niroso tamin’ny fitsidihana ireo toerana nanaovana ny fampiharana ny delegasiona tao aorian’ny fizarana ny “Attestation de fin de formation”.
“Olo mahay raha, tsy very mandeha”
©️ SCOM METFP